त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाटै मिर्गौला तस्करी हुने गरेको खुलासा !फर्जी नागरिकता बनाई नाता प्रमाणित - www.kchhakhabar.com
त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाटै मिर्गौला तस्करी हुने गरेको खुलासा !फर्जी नागरिकता बनाई नाता प्रमाणित
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र २३, २०७४ समय: १४:१७:२१
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज भित्रैबाट अवैध रुपमा मिर्गौला कारोबार हुने गरेको खुलेको छ । हाम्रो डक्टरको अण्डर कभर रिर्पोटिङबाट त्रिवि शिक्षण अस्पालबाटै मिर्गाैला तस्करी भएको खुलासा भएको हो । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–११ का नविन खत्रीको मिर्गौला काठमाडांै म्हैपी बस्ने शम्भुलाल श्रेष्ठले अवैध ढंगबाट खरिद गरी प्रत्यारोपण गरेको फेला परेको छ । कानुन अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न मानव अंग प्रत्यारोपण ऐन छ । जसअनुसार आफन्त बाहेक (परिवारका सदस्य, नजिकको नातेदार, दुई या दुई भन्दा बढी परिवारका सदस्यका नजिका नातेदार, धर्मपुत्र धर्मपुत्री र मस्तिष्क मृत्यु भएका जो कसैको) का अन्य व्यक्तिले मिर्गौला लिन, दिन पाईदैन ।
तर, खत्रीको मिर्गौला श्रेष्ठलाई बेच्न दलाल र त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासनका दुई कर्मचारीको मिलेमतो रहेको देखिएको छ । यस क्रममा दलालले नविन खत्रीको थर परिवर्तन गरेर श्रेष्ठ बनाउन फर्जी नागरिकता बनाए । फर्जी नागरिकताको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मिर्गौला निकालेपछि शिक्षण अस्पतालले दिएको डिस्चार्ज पेपर (नविन श्रेष्ठ बनाइएको छ) र मिर्गौला नभएको भनि चितवन मेडिकल कलेजले दिएको रिपोर्ट जसमा नविन खत्री उल्लेख छ । दलालमार्फत मिर्गौला बिक्री पोखरामा डेरा गरी बस्ने नारायण जिसीसँग नविन खत्रीको पोखरामा चिनजान भयो । खत्री पोखरामा एक वर्षदेखि घर बनाउने काम गर्दै आएका थिए । उनी घरबाट कसैलाई खबर नगरी भागेर पोखरा पुगेका थिए ।
खत्री भन्छन्, ‘नारायणसँग रक्सी खाँदाखादै चिनजान भएको थियो । एकदिन उसले एउटा स्याउ दिनुस्, १० लाख दिन्छु र गाडी लोन (ऋण) मा निकालिदिन्छु भनेर भन्यो ।’ तस्करले मिर्गौलालाई स्याउ भनेर संकेत गरेका थिए । २८ भदौ ०७३ मा नविनलाई नारायणले आफ्नो डेरामा लगेर राखे । उनले नविनलाई रक्सी खुवाए । केही दिन आफ्नो डेरामा राखेपछि नविनलाई नारायणले पोखराबाट गाडीमा राखेर काठमाडौं ल्याए ।
नविन भन्छन्, ‘तस्करले मलाई स्याउ दिएमा १० लाख पाइन्छ भनेका थिए ।’ पोखराबाट कलंकी ल्याएपछि तस्करले उनलाई कंलकी ओराले र त्यहाँको एक होटलमा खाना र रक्सी खुवाए । त्यसै दिन नारायणले भक्तपुर बस्ने प्रकाश बस्नेतलाई फोन गरे । तर, फोन उठेन । भोलीपल्ट नारायणले उनलाई कलंकीबाट गोगंबु बसपार्क पु¥याए । नारायणले प्रकाशलाई त्यहीबाट फोन गरेर मान्छे ल्याइदिसकँे र आउन भने ।
तस्करले उनलाई गोगंबु चोकमा रहेको चिन्तामणीको होटलमा राखे । त्यही होटलमा खाजा खुवाएर नारायणले अर्का तस्कर प्रकाशलाई नविनको जिम्मा लगाए । प्रकाशले गोगंबुमा रहेको म्हैपी मन्दिर नजिकै लगेर शान्ता श्रेष्ठलाई भेटाए । पीडित खत्री भन्छन्, ‘उहाँलाई राम्रोसँग खानपिन गराउनु । रक्सी खुवाउनु । चेकअप गराउनु । काम सकिएपछि मलाई भन्नु भनेर प्रकाशले शान्ताको जिम्मा लगायो ।’ शान्ता नविनको मिर्गौला लिने सम्भुलालको श्रीमती हुन् । करिब चार महिनासम्म नविन मिर्गौला लिने सम्भुलालको म्हेपीस्थित घरमै बसे ।
यसैक्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्बन्धी निर्णय गर्न बोर्ड बैठक बस्यो । ७ पुस ०७३ मा मिर्गौला दिने र लिने दुबै पक्ष त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगे । उनीहरूले अस्पतालका कर्मचारी कुमार खनाललाई भेटे । कुमारले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘उहाँहरु (मिर्गौला लिने पक्ष) को पैसा धेरै खर्च भइसकेको छ । तपाईँले जसरी हुन्छ, दिने काम गर्नुस् । एउटा मिर्गौला दिएर केही हुँदैन ।
दुई महिनासम्ममा ढुङ्गा फोरर खान सकिन्छ ।’ यसरी जोडियो अस्पताल भोलीपल्ट अर्थात ८ पुषमा अस्पतालको बोर्ड बैठक बस्यो । बैठकमा मिर्गौला लिने र दिने दुवै पक्षलाई बोलाइयो । तर, मिर्गौला लिने शम्भुलाल श्रेष्ठ र दिने नविन खत्री भएकाले तस्करले नविनको थर परिवर्तन गरी नक्कली नागरिकता बनाए । केन्द्रीय अनुशन्धान ब्यूरो (सिआईबी) को प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट नक्कली नागरिकता जिल्ला प्रशासनबाट नभई अन्यत्रैबाट बनेको खुलेको छ ।
अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाईमा कार्यरत कर्मचारी कुमार खनालले अस्पतालको बोर्ड बैठकमा नाता सोधेँ दाई–भाई भन्न सिकाए । बोर्ड बैठकमा सबैभन्दा पहिले मिर्गौला लिने सम्भुलाल र उनका आफन्त गए । अन्तिममा नविनको पालो आयो । ‘बोर्ड बैठकमा चार जना कालो कोट लगाएका व्यक्ति थिए । तीनै मध्ये छेऊमा कुमार खनाल पनि बसेका थिए । तपाईं सम्भुको भाई हो की होइन नढाँटी भन्नुस् भने । मैले हो भने ।’
नविनलाई अस्पताल बोर्डले गर्ने काम बारेमा जानकारी लिएको थियो । सामान्य सोधपुछ पछी अस्पताल बोर्डले नाता रहेको जनाउने गरि कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगायो । पीडित र दलालले अस्पतालमा सेटिंग मिलाउने भनेर आरोप लगाएका अस्पतालका कर्मचारी बोर्ड बैठकपछी उनलाई मिर्गौला दिने र लिने बीचको पारिवारिक नाता भए÷नभएको पुष्टि गर्न आवश्यक मेडिकल जाँच गर्न लगाइयो ।
नाता प्रमाणित गर्न उनले ६० हजार खर्चेर स्वास्थ्य परीक्षण गरे । स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. रविन्द्र नेपाली कहाँ गए । उनको रिपोर्ट हेरेपछि डा. नेपालीले भने, ‘तपार्इंको हुलिया हेर्दा मिर्गाैला लिने व्यक्तिसँग मिल्दैन । तर, मिर्गाैला प्रयारोपण गर्न मेडिकल बोर्डबाट पास भएर आइसकेछ ।’ डा. नेपाली प्रत्यारोपणको मिति तय गर्ने वा नगर्नेमा अलमलमा परे । त्यतिबेला मिर्गौला लिने व्यक्ति सम्भुलालले डा. नेपालीलाई जसरी पनि मिलाईदिन भने । र, अन्त्यमा डा. नेपालीले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि २० पुषको मिति तोकिदिए ।
‘भाग्न खोज्दा दलालले धम्काए’ नविनले प्रत्यारोपण नगर्र्दै भाग्ने सोँच पनि बनाएका थिए । तर, तस्कर प्रकाशले भागेमा झन् समस्यामा पर्ने भन्दै धम्काए । धम्कीपछी उनी डराए र भाग्नभन्दा अप्रेशन गर्ने सोच बनाए । सम्भुलालले नविनलाई बिहान पाँच बजे नै अप्रेशनका लागि टिचिङ अस्पताल लगे । उनको बिहान ९ बजेबाट अप्रेशन शुरु भएको र दिउँसो तीन बजे होस् आयो । ‘चार बजे मैले मान्छे चिन्न थाले । म पहिलेको जस्तंै भए ।’ उनले भने ।
अस्पतालले नविनलाई २३ र सम्भुलाललाई २५ पुषमा डिस्चार्ज ग¥यो । अस्पतालबाट निस्केपछि नविन सम्भुलालको घरमा एक साता बसे । सम्भुलालले तस्कर प्रकाशलाई बोलाए । प्रकाश सम्भुको घरमा आए र, पैसा झोलामा हालेर नविनलाई दिए । ‘सम्भुलालले पैसा पट्टाउने र प्रकाशले झोलामा पैसा राख्ने काम गरे ।’ उनले भने । पुरै रकम नदिएपछि घटना सार्वजनिक मिर्गौला बेच्ने पक्ष नविनलाई तस्कर प्रकाश बस्नेतले कबुल गरेको १० लाख रकम र गाडी नदिएर एक लाख २५ हजार मात्रै दिएकाले घटना सार्वजनिक भएको हो । ‘हाम्रो डक्टर’ टिमको स्टीङ अपरेशनमा तस्कर प्रकाश बस्नेतले मिर्गौला लिने पक्षबाट लिएको रकम मध्ये डेढ लाख त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासनका कर्मचारी धनबहादुर गुरुङ र कुमार खनाललाई आठ हजार दिएको बताएका छन् ।
मिर्गौला दिने नविनले पनि अस्पताल प्रशासनका गुरुङ र खनालले पैसा लिएर फर्जी कागजातलाई सेटिङ मिलाएर सही बनाएको बताएका छन् । यसो भन्छन् अस्पतालका निर्देशक यस विषयमा अस्पतालका निर्देशक डा. दीपकप्रकाश महरासँग बुझ्दा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले प्रशासनसँग बुझेरमात्र बाँकी जानकारी दिन सकिने बताए । यस काण्डमा मुछिएकामध्येका एक कुमार खनाल त्यतिबेला सामाजिक सेवा ईकाइका फोकल पर्सन रहेको उनले पुष्टि गरे । यद्यपी खनाललाई अहिले आन्तरिक रुपमा सरुवा गरिएको तर किन गरिएको आफुलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।
मकैको जुँगाको फाइदाः पिसाब लगाउने देखि मोटोपन घटाउने सम्म
एजेन्सी । मकै संसारमा सबै भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा लगाईने तथा सबै भन्दा धेरै खपत हुने बालीमा पर्दछ । बहु उपयोगि, यो बाली ब...
ज्योतिष शास्त्रमा अंकको ठूलो महत्व छ । अंक अनुसार नै मान्छेको भविष्यबारे बताउँछन् ज्योतिषहरु । विवाहका लागि अंकमिलान एकद...
​बिहानको नास्तामा के खाने के नखाने ?
प्राय हामि सबैले बिहान नास्ता खान्छौँ तर ब्रेकफास्टमा के कस्ता खानेकुरा खानुपर्छ भनेर धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ । अगाडि जे द...
महिनावारी गडबढ हुनुका कारण
महिनावारी समयमै नभएको गुनासो गर्ने महिलाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नियमित समयमा महिनावारी नहुनुको कारणमा हर्म...
एकैदिन ७ जनासँग याैन सम्पर्क गर्ने महिलाको बयान
एक अष्ट्रेलियन महिलाले आफ्नो सेक्स एडिक्सनको बारेमा सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउने खुलासा गरेकी छिन् । सी सेड अनलाइन पोर्टलकी...
कुमारी केटी सँग पहिलो पटक ‘सेक्स’ गर्दा ध्यान दिनै पर्ने कुराहरु
सम्भोग सुरु गर्नु अघि यौन उत्तेजना वढाउन गरिने विभिन्न यौन क्रियाकलाप प्राक्कक्रिडा (फोर प्ले) गर्ने गर्नु पर्छ। यौन क्र...